Apple tree | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Apple tree
Ahoana ny fiarovana "Melbu" avy amin'ny bibikely sy aretina
Ny hazo Apple dia iray amin'ireo hazo lehibe ao amin'ny zaridaina. Maro ireo karazana vary sy tsiro samihafa. Na izany aza, dia zava-tsarobidy vita amin'ny vitamina izy rehetra. Na izany aza, mba hahazoana vokatra tsara, ny mpamboly iray dia mila mamonjy ireo hazo amin'ny aretina sy ny bibikely. Ny aretina lehibe indrindra nataon'i Melba sy ny fomba fitsaboana azy ireo dia karazana apples fanta-daza malaza, malaza amin'ny voankazo mahavokatra sy ny vokatra avo lenta.
Famaritana, namboly ary nikarakara ny poma Gloucester
Apple Gloucester dia karazana fiompiana alemana samihafa, vokatry ny fiampitana karazana Glockenapfel sy Richard Delishes. Io karazany io dia nentina tamin'ny 1951 tany Alemaina. Ny tombontsoa azo avy amin'ny karazan-tsakafo dia azo antoka fa ny hatsaran-tarehy sy ny tsiro, ary ny fihazonana ny kalitaon'ny voankazo. Manana fahasamihafana amin'ny ririnina io karazany io, nefa tsy ampy ny matsiro.
Inona no tokony hatao raha hita eo amin'ny hazo poma ny paozipaonina noho ny mitsabo zavamaniry amin'ny bibikely iray
Ny siramamy eo amin'ny hazo pòm dia mety hipoitra be dia be, hany ka izay rehetra te hiaro ny vokany dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hiatrehana izany. Ny atidoha dia bitika kely, ny haben'ny dia tsy mihoatra ny 4-7 mm, na izany aza, io no karazan'aretina faran'izay mampidi-doza indrindra amin'ny zaridaina sy ny voankazo. Ny hazo papier an'arivony dia atahorana ireo bibikely isan-taona, miaraka amin'ny fahaverezan'ny vokatra voajanahary.
Ranom-boalavo Apple: famaritana ireo karazana malaza
Ranetka no anarana mahazatra amin'ny karazan-javamaniry samihafa azo avy amin'ny karazana paoma, azo avy amin'ny fifidianana malaza any Eoropa, izay misy karazan-kazo azo avy amin'ny tahom-bozaka vita amin'ny hazo paoma syberia. Vokatry ny fihadian-tsain-tsakafo ny hazo avo tsy mitsaha-mitombo izay mifanaraka tsara amin'ny toetr'andro henjana ary miavaka amin'ny vokatra avo.
Karazan-koditra: fomba, fomba ary fiomanana amin'ny fanaraha-maso ny fiompiana bibikely
Ankehitriny dia tsy misy olona iray miaro amin'ny alikaola toy ny kalalao kalalao. Miparitaka manerana an'izao tontolo izao izany, manimba ny fambolena na amin'ny indostrialy indostrialy, ary amin'ny tany. Indraindray dia mihemotra mandritra ny volana maro na taona maro ny ady aminy. Ny voankazo voarara, ny ezaka be, ny fotoana sy ny vola laniana amin'ny fandringanana ity parasy ity - tsy misy olona te-hiditra amin'izany.
Ahoana ny fomba hanamboarana hazo apolla aorian'ny famokarana, fanaraha-maso ny bibikely
Ho an'ny fambolena sy fiompiana be dia be, dia ilaina ny manome azy ireo ny fiarovana amin'ny aretina sy ny bibikely. Tsy misy afa-tsy amin'io lafiny io dia hazo fihinam-boankazo no mitombo eo amin'ny zaridaina. Amin'ny ankapobeny, ny mpikaroka dia matetika liana amin'ny fanatsarana ny paompy mialoha sy aorian'ny voninkazo.
Kolonovidnye apple: fambolena, fikarakarana, manapaka
Ny olana mandrakizay momba ny mponina amin'ny fahavaratra dia ny tsy fisian'ny toerana. Te-hamboly be aho, saingy manana sisintany ny habaka, mila mandamina tsara ny fizarana ilay faritra ianao. Raha azo atao ny manao fanandramana ao amin'ny zaridaina farafahakeliny isan-taona, dia tsy hiasa amin'ny zaridaina io isa io. Ny hazo tsirairay dia mitaky toerana ho an'ny fototarazo sy ny satroboninahitra.
Ny fomba hambolena sy fananganana karazana hazo pòm "Medunitsa" ao amin'ny faritra misy azy ireo
Ny hazo "Medunitsa", ilay karazan-kazo malaza, dia miavaka amin'ny karazam-boninkazo mandritra ny lohataona, izay manamarika ny fahasamihafana amin'ny ririnina sy ny toetra tsara amin'ny voankazo. Ny tantaran'ireo karazan-tsakafo karakaraina "Medunitsa" karazana Apple dia "Medunitsa" efa nitondra 50 taona mahery lasa izay. Ny mpahay siansa S. I. Isaev dia namakivaky karazany roa: Cinnamon Striped and Welsey. Io karazana io dia heverina ho zava-bita tsara satria manohitra ny fandokafana.
Ny fomba hanamboarana karazana paoma "Sinap Orlovsky" ao amin'ny zaridainany
Ny karazana paoma Sinap Orlovsky dia tena sarobidy amin'ny mpamboly fa tsy ny fanandramana tsara ihany, ny fampisehoana ny voankazo, ny fiainany efa ela, ary koa ny hatsaran'ny ririnina. Ny tantaran'ny fifantenana karazana apples "Sinap Orlovsky" Ny karazana applel "Sinap Orlovsky" dia nentin'ny Ivon-toeram-pikarohana fikarohana ho an'ny fambolena voankazo rehetra tamin'ny taona 1955.
Fambolena hazo pòm "Northern Synapse": tombony sy tsy fahampian'ny vary, fambolena sy fiahiana
Ireo karazana aviavy faran'ny ririnina ao amin'ny karazam-borona "Northern Synapse" dia tsy ambany noho ny tsiro amin'ny karazam-piainana ankafizin'ny aristokrasia ao amin'ny Ila Bolantany Avaratra. Na izany aza, ny fisongadinan'ity vondrona ity dia vokatry ny faniriana hanatsara ny voankazo efa misy, izay natao ho an'ny olo-manan-kaja. Ny fahasamihafana dia manana fanoherana avo lenta, izay tena manan-danja tokoa amin'ny faritra izay mametra ny toe-java-pitrandrahana amin'ny toetr'andro.
Ny fomba hanamboarana hazo apple Zhigulevskoe ao an-jaridainako
Ny fangatahana ny paoma dia voamarina amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Saingy indrindra amin'ny ririnina sy ny fiandohan'ny lohataona, dia tiantsika ny pince juicy sy mamy. Efa hohanina ny karazam-boaloboka ety. Afaka misafidy poma importées ianao, saingy lafo sy matetika tsy misy tsirony. Noho izany, mendrika ny karazana fararano ny fitiavana manokana ny mpamboly, izay mipoitra aoriana ary voatahiry tsara.
Famolavolana hazo "masoandro": paolika momba ny fambolena sy fiahiana
Ny valo fararano amin'ny karazana "masoandro" dia tian'ny mpamboly an-trano noho ny hakantony sy ny kalitao tsara. Ny fanandramana, ireo cluster mena dia manamboatra ny satroboninahitra kely misy hazo kely. Ankoatra izany, io karazany io dia miavaka amin'ny fahatsaran'ny fambolena fambolena. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba hanamboarana hazo "Masoandro" ao amin'ny tranokalanao, ary koa ny fanadihadiana ny tombony sy ny tsy fahampian'ny tombony.
Varimbazaha saribakoloka "Valam-pejy", famolavolana sy fikarakarana hazo ao an-jaridaina
Ny fisehon'ny hazo apolora dia namaha ny olan'ny tsy fahampian'ny habakabaka amin'ny sehatra madinika tsy miankina, ka mamela ny zaridaina sy ny mpamboly hendry mba hampiasa tsara ny faritra ary hanangona harena mahafinaritra avy amin'izany. Diniho ny endri-javatra iray amin'ny karazam-bary faran'izay tsara ririnina ary hamakafaka ireo tsiranoka amin'ny fambolena azy.
Tsiambaratelo momba ny fambolena pulpan'ny "Berkutovskoe"
Ny hazo Apple dia tetikasa maharitra eo amin'ny zaridaina, ary tokony hanatona azy tsara ianao, satria mifidy hazo izay hanompo anao mandritra ny taona maro. Tokony hodinihina ny zava-drehetra: ny toetoetry ny fikarakarana, ny fahaterahana, ny fotoam-pamokarana, ny fotoana fitehirizana ary ireo antony maro hafa. Ho an'ny toetr'andro eo amin'ny tariby afovoany, ny patsabe Berkutovskoe dia tonga lafatra.
Famaritana, fambolena sy fikarakarana pèla misy poizina
Ny karazany dia fantatra amin'ny zaridaina ao an-tokantrano nandritra ny zato taona mahery. Tany aloha dia tsy maintsy nanatrika teo amin'ny zaridaina rehetra izy, ary androany dia hadino kely izy noho ny habetsahan'ny karazana paoma hafa. Na izany aza, ireo izay tsy nivadika taminy, dia nahazo vokatra tsara avy amin'ny paoma tsara tarehy miaraka amin'ny tsiro mahafinaritra. Famaritana ny karazan-kazo apetaka "Cinnamon striped" Mba hahafantarana ny tombontsoa avy amin'ny hazo zaridaina, tokony handinika amim-pitandremana ny famaritana ny karazana "Cinnamon Striped" ianao.
Tsiambaratelo momba ny fambolena hazo mahazatra "Bashkir Beauty"
Ny fisafidianana karazana pòm sasany amin'ny fambolena ao an-jaridainako, tiako ho tsara tarehy izy, voankazo matsiro ary, na inona na inona ny toetrandro, dia mitondra vokatra foana. Ny hazo paoma "Bashkir Beauty" dia nanaporofo ny toetra amam-panahin'izy rehetra - dia hahita ny famaritana ny karazany misy sary, sy ny toetoetry ny fambolena sy ny fambolena ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ny tsiambaratelon'ny fambolena puppet amin'ny "Champion"
Karazana varimbazaha Apple noho ny vokatra avy amin'ny vokatra sy ny tsirony no nahalalaza ny lazan'ny mpamboly Eoropeana. Io karazany io dia heverin'ny maro ho safidy tsara ho an'ny famokarana ara-barotra. Ankoatr'izany dia tena mahomby tokoa ny mampifandray ny fahatsoran'ny toe-pambolena sy ny vokatra avo lenta.
Ny toetra sy ny toetoetran'ny fambolena amin'ny vary varimbazaha "Apple"
Ny hazo Standard dia tena mahita ny tompona zaridaina kely, izay tsy dia misy foana ny toerana. Ny kolonovidnye karazana voankazo vokatra dia afaka mampiasa tsara ilay faritra, amin'ny voalohany dia afaka mitombo ao anaty tavoahangy ary miaraka am-pamokarana be dia be. Ny iray amin'ireo karazana ririnina be ririnina ahitana satroboninahitra lava dia ny "Filoha", ny voankazo izay tsy mitokona afa-tsy amin'ny habetsahana, fa amin'ny haben'ny habeny.
Ahitana hazo papango fotsy vita amin'ny lohataona
Ny ririnina dia mifanakaiky sy manatona tsy tapaka ny zaridao, ary miaraka aminy ny rivotra sy ny fisakafoanana, ny fanodikodinam-panala sy ny bibikely izay mipoitra ao anaty hodi-kazo. Izany rehetra izany dia mety manimba ny voanjobeny. Ho hitanao ny antony hamelana ireo paoma apetraka, na ny fotsy amin'ny lohataona ihany, ny fotony sy ny fomba hiarovana ny zaridaina amin'ny anton-javatra ratsy amin'ny alàlan'ny fanadiovana ny hazo.
Ahoana ny hiatrehana ny fako amin'ny apples
Ny aretina dia aretina mahazatra izay mety hisy fiantraikany amin'ny hazo apalalany. Sarotra ho an'ny mponina amin'ny fahavaratra ny miatrika io aretina io, saingy azo atao izany. Ao amin'ilay lahatsoratra dia hanome torohevitra mahasoa sy torohevitra mahasoa avy amin'ireo mpamboly za-draharaha izay hanome fahalalana momba ny fomba hisorohana ny fako amin'ny paoma.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Apple tree